Fianarana: azo atao ny fiankinan-doha tsy misy fanafany | Valin'ny Fanamarinana
Home fianarana Unlearning
"Ny tsy fahaiza-mamaky ny taonjato 21 dia tsy ireo izay tsy mahay mamaky teny sy manoratra, fa ireo izay tsy afaka mianatra, tsy mahalala ary mianatra."
Ny fifehezana sy ny fiankinan-doha dia vokatry ny fahazarana lalina. Noho ny zavatra fantatsika momba ny neuroplasticity dia misy ny fanantenana fa afaka mampianatra ny fahazarana izay tsy manampy antsika hitombo. Na dia ny sariitatry ny atidoha izay nohariana tsy mandeha mihitsy, dia mety hampihena amin'ny tsy fampiasana azy ireo. Ny fiheverantsika ny fahazoana zava-mahazatra vaovao dia toy ny zavamaniry vaovao maniry ary mamela ireo tranainy taloha. Mitaky fotoana sy ezaka maharitra ny fanovana ny fitondrantena, toy ny fahatsiarovana ny fahafinaretana sy ny siansa izay mitarika ireny fahatsiarovana ireny dia eo foana mba haka fanahy antsika. Amin'ny fahalalana sy fanohanana dia afaka manatontosa fiovana lehibe isika.
Ny fijerena ny modelin'ny "Adi-hevitra dia voalohany, aretina mitaiza ny valisoa ateraky ny atidoha, ny antony manosika, ny fahatsiarovana ary ny rafitra mifandraika ..." dia fandrosoana goavana ary afaka manampy amin'ny fanesorana ny fanilikilihana izay matetika mifandray amin'ny fiankinan-doha amin'ny lasa karazana fahombiazana ara-moraly na fahalemena. Manampy antsika hahatsapa ihany koa ny toetra mampiavaka ny aterineto izay manintona olona maro. Ny atidoha tsara indrindra ao amin'ny orinasa IT sy ny dokam-barotra no nanao izany.
Ny zava-misy fa ny fiankinan-doha koa dia dingana iray, fitondran-tena ianarana, afaka mampandinika antsika amin'ny tetikady fisorohana, alohan'ny hahatongavantsika, na ireo akaiky antsika, dia tsy afaka mifehy loatra, satria mety ho lava sy sarotra ny lalana.
Ny tantaran'ny sahona dia fanampiana ilaina amin'ny fianarana eto. Nandeha ny tantara fa nametraka sahona ho rano mangatsiaka ny mpikaroka. Nipoitra tampoka avy hatrany ny valin-kafatra voajanahary nahatsikaritra ny loza mitatao. Rehefa napetrany tao anaty rano mangatsiaka anefa ilay sahona, ary nalemy be ny hafanana, dia namaoka sy maty ny sahona. Ny zana-boalaza dia nanjary nahazatra ny fitomboan'ny hafanana ary ny valiny voajanahary voajanahary dia lasa tsy mahomby amin'ny famonjena ny ainy. Izany dia mety hitranga amin'ny olona rehetra rehefa very ny fahatsapantsika ny fandrahonana isika ary tsy mahasakana antsika ny valinteny enti-manahirana.
<< Fanombohana momba ny firaisana ara-nofo sy fanombohana Fiankinan-doha amin'ny Internet >>